ဦးရာဇတ် Archives - Page2of5- News @ M-Media
အာဇာနည် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ၏ (၁၁၆)နှစ်မြောက်မွေးနေ့
ဖန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ M-Media ယနေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့သည့် အာဇာနည် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ၏ (၁၁၆)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဆရာကြီးဦးရာဇတ်အကြောင်း[Read More…]
January 20, 2014 — ဦးရာဇတ်
အာဇာနည်များနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည် စကားဝိုင်းမှ ဦးရာဇတ်အကြောင်း
ဇူလိုင်-၁၉၊၂၀၁၃ Credit. Moe Rain FB မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ Sky Net TV မှာ ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည် စကားဝိုင်းမှ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်အကြောင်း တိုင်းပြည်အတွက်[Read More…]
July 20, 2013 — ရုပ်သံသတင်း, ဦးရာဇတ်
ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၃ M-Media အမ်တူးအေ မမေ့နိုင်ရွယ်ရည် ၆၆-နှစ်တိုင်လေပြီ အာဇာနည်မြတ် ဦးရာဇတ် (၆၆-နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်) ၁၈၉၈-ခု ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀-ရက်နေ့မှာ လူသားတစ်ဦး ကမ္ဘာမြေကို ဖွားမြင်ရောက်ရှိလာတယ်။ သူ[Read More…]
July 18, 2013 — ဦးရာဇတ်, ဆောင်းပါး
မွှေးပျံ သင်းကြိုင် ရနံ့စုံ လှိုင်တဲ့နေ့
ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၊ ၂၀၁၃ စိန်စံထိုက် (ဟံသာမြေ) M-Media ၂၀. ၁. ၂၀၁၃ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် (၃) နာရီခန့်တွင် strand hotel ခန်းမကြီးအတွင်းမှာ ရနံ့စုံသင်းပျံတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခု ကောင်းကင်က[Read More…]
January 25, 2013 — ဦးရာဇတ်, ဆောင်းပါး
မြွေဆိပ်ဖြေဆေးဝယ်ရန် ဂရုဏာရှင်အသင်းသို့ ဦးရာဇတ်(၁၁၅)နှစ်မြောက် ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ငွေ ၂၃ သိန်းလှူဒါန်း
ဇန်နဝါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၃ M-Media အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ရည်စူးပြီး ဦးရာဇတ်(၁၁၅)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ကရုဏာရှင်အသင်း (ညောင်ဦးမြို့) သို့ အများပြည်သူတို့ အတွက် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အလုံး (၁၄၀) ၀ယ်ယူ[Read More…]
January 22, 2013 — ဦးရာဇတ်, မြန်မာသတင်း